मेरी सेक्सी दिदीलाई मस्त चिकेको - Naughty Nepali
Home » Incest Sex Story » मेरी सेक्सी दिदीलाई मस्त चिकेको
मेरी सेक्सी दिदीलाई मस्त चिकेको
भेनाको भिसा लागेपछि दिदीको लागि म नै सहारा भए। मेरो भान्जी भर्खर ३ वर्ष पुगेकी हुदी हो। दुरुस्त दिदी गोता गएकी थिइ। दिदीले भान्जीलाई आफ्ना दुध पिलाएको धेरै पटक देखेको थिए तर मलाई त्यति चासो थिएन। यो सब त्यो बेला देखी सुरु भयो जब मैले दिदीको पुति देखे।
दिदी सुत्ने बेलामा पेटिकोट र ब्रा लगाउनु हुन्थ्यो। म त्यो रात टिभीमा चन्द्रकान्ता धारावाहिक हेर्दै थिए। अचानक मेरो आँखा दिदीमा पर्यो। म हैरान भए। दिदीको पेटिकोट फर्केर उहाँको कम्मर भन्दा माथी पुगेको थियो। दिदी निन्द्रामा मसत हुनु हुन्थ्यो। दिदी खाटको डिलमा सुत्नु भएको थियो। उहाँको एक हात पुति नेर थियो भने हर्को हात सिरानीमा। मेरो सास नै रोकिएला जस्तो भयो। दिदीले पेन्टी लगाउनु भएको थिएन। जसले गर्दा मैले दिदीको पुति देखे।
मैले यति राम्ररी केटीको पुति देखेको थिइन। म विस्तारै नजिक गए। दिदीको पुतिमा पातला रौं थिए। दिदीको पुति एकटकले सास रोकेरै हेर्न थाले। ‘कति राम्रो र मासुम हुँदो रहेछ पुति।’ म सोच्दै थिए।
मेरो पाइन्ट भित्र लाडो उकुसमुकुस हुँदै थियो। मलाई दिदीको फोटो खिचुँ जस्तो लागेको थियो। मेरो मनमा दिदीको पुतिमा लाडो घुसार्ने लोभ पनि आयो तर मैले हिम्मत गर्न सकिन। दिदीको दिदीको दर्शनले मलाई दिदीको दिवाना बनायो। त्यस दिन देखि मलाई दिदी खुब मन परी। म दिदीको अंग अंगमा लोभी नजरले हेर्थे।
दिदी साँच्चै नै मस्तकी माल थिइ। कति गोरी, सेता मिलेका दाँत, राता ओठ, लामो, कालो र बाक्लो केस, साना नाक, निर्दोष गाजलु नयन अनि गोलो गोलो मोटो चाक। एकसम मस्त माल थिइ।
मलाई त पटक पटक दिदीको पुतिको झल्को मात्र आउँथ्यो। भेना गएको एक महिना पछि दिदीले भेनालाई खुब मिस गर्न थाल्नु भएको थियो। म अब दिदीको भाइ मात्र नभएर साथी र सहारा भएको थिए। कोठमा चाहिने सामानको खरिद र अन्य काममा पनि म नै सहयोगी हुन्थे।
दिदीको स्वभावमा परिवर्तन देखिन थालेको थियो, दिदी र म निकै कुरा गर्थ्यौ। दिदी मेरा गर्लफ्रेन्डका बारेमा कुरा गर्न बढी रुचाउनु हुन्थ्यो। एक पल्ट मैले दिदीलाई छाडा हुँदै भने, ‘तपाई यति राम्री हुनु हुन्छ, तपाईको पनि बेलामा निकै ब्वाइफ्रेन्ड थिए होलान है।’
मेरो कुराले दिदीले छड्के आँखाले मलाई हेर्दै भन्नु हुन्थ्यो ‘अँ छु राम्री, धेरै मलाई फुरुक्क नबना।’ दिदीको मुस्कारन र मादकले भरिएको मुहार मलाई खुब मन पर्यो। मैले झन् थपे, ‘साच्ची दिदी तपाई लाई क्याम्पस ड्रेड खुब सुहाउँथ्यो। तपाई सर्ट र हाफ स्लीभ सर्टमा एकदम सुन्दर देखिनु हुन्थ्यो।’ मेरो कुराले दिदी निकै खुसी हुनुभयो।
दिदीलाई आफ्नो प्रशंसा गरेको मन पर्थ्यो । हुन त यो हर केटीको स्वभाव हो तर दिदीको म प्रतिको नजर चेन्ज हुदै गएको थियो। दिदी मलाई एकदम ह्याण्डसम भन्नुहुन्थ्यो। तर म भन्दा ५ वर्ष जेठी दिदीलाई चिक्ने हिम्मत गर्न सकेको थिइन, मात्र दिदी सम्झेर हस्तमैथुन गर्थे।
अक्सर हामी दिदी भाइ राती ८ बजे देखि ११ बजेसम्म कुरा गर्थ्यौङ जुन भान्जी सुतेकी हुन्थी। एकपल्ट दिदीले मलाई सोध्नु भयो, ‘कान्छु तलाइ मेरो के मनपर्छ?’ म अप्ठेरोमा परे। मन त मलाई दिदीको पुति मन परेको थियो। त्यसो त दिदीको हरेक अंग मन पर्थो। मैले कुरा बनाउँदै भने, ‘तपाईको सब कुरा मिलेका छन्। ज्यान सारै राम्रो लाग्छ, उचाइ र मोटाइ एकदम फिट छ’
दिदीको चाक विहेपछि मोटाएको थियो, दिदी झन् सेक्सी देखिनु भएको थियो। मेरो कुराले दिदी खुसी हुनु हुन्थ्यो। दिदीले मलाई सोध्नु भयो, ‘तलाई कस्ती केटी मन पर्छ?’ मैले सोझै भने, ‘तपाई जस्ती’, दिदीले हास्दै भन्नु भयो, ‘हैन तलाइ म त्यस्ती मन पर्छ है।’ दिदीमा उन्माद आयो।
त्यस रात खुसी भएर दिदीले मलाई केटी फसाउन निकै सिपालु रहेछन् भन्नु भयो। त्यसरात मेरो मनमा हलचल भयो। ‘केटी फसाउन सिपालु मतलव के म दिदीलाई फसाउँदै थिए! पक्का पनि, तर दिदीले बुझ्नु भयो। मलाइ एक किसिमको अनौठो र डर लाग्यो।
दिन बित्दै गए। दिदीका ति कुराले गर्दा म दिदीबाट पर भए। तर दिदी मलाई खुब जिस्काउनु हुन्थ्यो। मलाई त रिस पनि उठ्यो। पुति चिक्दिन्छु अनि थाहा पाउँछे भनेर।
‘के रे मलाई सर्ट लगाको सुहाउछ रे! के रे मेरो फिगर राम्रो छ रे! के रे म सुन्दर छु रे! हा..हा..’ खै दिदी बौलाउनु भयो या के भयो, दिदी खाली मलाई जिस्काउनु हुन्थ्यो। कहिलेकाही त लाग्थ्यो दिदी म भित्रको चिक्ने चाहनालाई झन् बढाउँदै हुनुहुन्छ। आखिर त्यो रात पनि आयो।
भान्जी सुतेकी थिइ। हामी टिभी हर्दै थियौं। दिदी र म अलग अलग बेडमा बसेर टिभी हेर्दै थियौ। दिदी र मेरो बेड आमने सामने थियो। अचानक दिदीले पेटिकोट उचालेर आफ्नो मुख पुछ्न लाग्नु भयो। मेरो लाडो ठनक्क ठन्कियो। दिदीको पुति देखियो। दिदीले आज अन्जान भन्दै आफ्नो पुति मलाई देखाएपछि मैले कुरा बुझे। ‘दिदीको पुतिमा आगो बलेछ, दिदीको पुतिमा काउकुती लागेछ, दिदीको पुति चिलाएछ, दिदी मलाई उहाँलाई चिक्न उक्साउनु हुनुहुदो रहेछ। तैपनि बाटो क्लिअर थिएन।
म एकटकले दिदीको पुति हेर्दै थिए। अचानक दिदीले पेटिकोट तल झार्दै भन्नु भयो, ‘के हेरेको खाउँला झै गरी?’ म अकमक्क मा परे। दिदी खुब हास्नु भयो। अनि थप्नु भयो, ‘तलाई त दिदीको सुसु गर्ने ठाउँ पनि मन पर्छ क्या हो?’ दिदीलाई मैले यस्तो रुपमा देखेको थिइन। सायद यौनको भोकले दिदीमा धेरै मादक छाएको थियो। म नर्भस भए, त्यसैले बाहिर निस्के। दिदी गुपचुप हुनुभयो, सायद निरास पनि। बाहिरबाट हिम्मत जुटाएर सरासर भित्र आएर ढोका लगाएँ। मेरो सास फुल्दै थियो। दिदीको अनुहार डरले रातो र नर्भस देखिन्थ्यो।
म अघि बढे। मेरो गिद्दे दृष्टी र सिंहको जस्तो चालले दिदी नर्भस हुँदै बोल्नु भो, ‘बाबु के भयो?’ मैले दिदीको पछाडीको केस समातेर दिदीको ओठमा लामो किस गरे। दिदी पनि मेरो अंगालोमा बाधिनु भयो। मैले दिदीलाई अझै अंगालोमा कसे अनि उहाँको तल्लो ओठ चुसेर गालामा किस गर्दै भने ‘I love you दिदी’, दिदीले पनि मेरो गालामा चुम्दै बोल्नु भयो, ‘I love you कान्छु’
म पेटिकोट बाहिर बाट नै दिदीको चाक मुसार्दै उहाको नाक, मुख, गाला चुम्दै थिए। दिदीले मेरो ढाड सुमसुम्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले दिदीको पेटीकोट माथी सर्काएर उहाँको नाङ्गो चाकमा हात हाले। कति कमलो थियो दिदीको चल र पुठ्ठाहरु। मैले खुब मुसारे। मेरो लाडो ठन्केर दिदीको पुति खोज्दै थियो। मैले दिदीको पेटिकोट अझ माथी उचालेर दिदीको चाकलाई आफु तिर दबाए। मेरो लाडोले दिदीको पुतिको पातलो जंगल छुन पुग्यो। मेरो लाडो झन् फनफनाउन थाल्यो।
मैले दिदीलाई भने, ‘दिदी म तपाईलाई चिक्छु है’, दिदी वस्, ‘अँ.. अँ..कान्छु’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले दिदीको कातलाई आफ्नो लाडोमा लगाए। दिदीले आगोबाट हात निकाले झै लाडोबाट हात निकाल्नु भयो। मैले भने, ‘दिदी के… भयो? हल्लाइदिनुस् न’
दिदीको स्वास तेज हुँदै थियो। उहाँले विस्तारै मेरो लाडोलाई हातले समात्नु भयो। मैले भने, ‘कस्तो छ दिदी’ दिदीले सासले बोल्नु भयो, ‘वाफ रे, निकै ठूलो छ…’ मैले दिदीको गालामा चुम्दै भने, ‘दिदी म यसलाई तपाईको सुसु गर्ने ठाउँमा छिराउछु’। दिदीको मुखबाट स्वा स्वा स्वास मात्र आयो।
दिदीको ओठ केही बेर चुसेर मैले उहाँलाई खाटमा सुताए। मैले दिदीको ब्रा खोले। उहाँको दुध निकै गोला र कसिला थिए। मैले केही बेर उहाँको दुध मुसारे अनि चुसे। मेरो लाडो एकदम कडा भएर आयो। दिदीको दुध मिठो थियो। छोड्नै मन लागेन। एकछिन पनि दिदीलाई भने, ‘दिदी u r so sexy’
दिदी केही बोल्नु भएन। मैले दिदीको पेट खुब चाटे। अनि दिदीको पुतिको टिसीलाई जिब्रोले जिस्काए। दिदीको मुखबाट सुस्केरा निस्कियो….ssss….sss
मैले दिदीलाई भने, ‘तपाइले भनेको होइन, खाउँला झै हेरेको भनेर, खाउँ त?’ मैले खुब चाटे। दिदीको हालत खराब भयो। उहाँको पुति पानी पानी हुँदै थियो। म उठे अनि आफ्नो लाडोलाई दिदीको पुतिमा जोडले धक्का मारे। दिदीले ‘ओइ…मरे नि…’ भन्नु भयो। मेरो लाडो दिदीको पुतिमा पुरा घुसेको थियो। मलाई दिदीको पुति एकदम तातो लाग्यो।
मैले भने, ‘के भयो दिदी सुसु दुख्यो?’
‘अँ….बाबा..कान्छु अँ…अँ… कति ठूलो हो नी… मारिस नि तैले त…’
मैले दिदीको पुतिमा धक्का मार्दै भने, ‘नचाइने कुरा नगर्नुस्, भेनाको धक्का खाएर भान्जी पाएको तपाईको सुसु कहाँ दुख्छ र?’ मैले झट्का लगाउँदै थिए।
दिदी, ‘…Um um… आमा ऐया…’ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। साच्ची नै मेरो लाडो दिदीको पुतिमा टाइट भएको थियो। मैले दिदीलाई मस्त चिके। मेरो विर्य पनिदिदीको पुति भित्र निकाले। दिदीले पनि भेनाको अभाव पुरा गर्नु भयो।
त्यस रात मैले अझै दुई पटक दिदीलाई चिके। दिदी आफ्नो प्रेग्नेन्सी बारे चिन्तित हुन थाले पनि मैले दिदीलाइ कण्डम लगाएर दैनिक चिक्न थाले। आजकाल दिदी आफ्नो पुतिमा काउकुती लाग्यो भने सर्ट र टिसर्ट लगाएर मलाई लोभ्याउनु हुन्छ। तर मलाई किचनमा काम गर्दा गर्दै गरेकी दिदीलाई पछाडीबाट सारी फर्काएर पुति चिक्न खुब मज्जा लाग्छ। म अझै पनि दिदीलाई मस्त चिक्छु। दिदी झन् आजकाल बढी सेक्सी देखिनु हुन्छ। भेना नआइन्जेल दिदी मेरी प्रियतमा हो। तर कहिले काँही लाग्छ दिदीलाई भेनाबाट कतै टाढा लगेर सदा चिकिरहुँ।
मेरो भेना सारै लक्की, मेरि दिदी जस्ती बुलेट माल पर्यो। मलाइ जलन हुन्छ। म दिदीलाई सोध्छु, ‘दिदी तपाईलाई भेना र म मा को मन पर्छ?’ दिदी मेरो लाडो सुमसुम्याउँदै भन्नुहुन्छ, ‘मलाई त तेरै माया लाग्छ, त नै मन पर्छ’
आखिर दिदी मेरी न हो, स्वास्नी भेनाको भएर के भो र? दिदीको पुति त मेरै हो नि।
दिदीलाई मस्त चिकेको, मेरी सेक्सी दिदीलाई मस्त चिकेको, सेक्सी दिदी, सेक्सी दिदीलाई चिकेको